विश्वका यी देशहरु जहाँ एउटा पनि एयरपोर्ट छैन
जहाँ जहाजलाई यात्रादेखि सामान लैजानसम्म प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि आज हामी तपाईलाई केहि देशको बारेमा बताउनेछौं जहाँ एयरपोर्ट छैन । एक रिपोर्ट अनुसार विश्वका पाँच देशमा विमानस्थल छैन । अब तपाईहरुको मनमा यो प्रश्न उठ्न सक्छ यी देशमा एउटै पनि एयरपोर्ट नै छैन भने यी देशमा कसरी जाने र अरु देशका मान्छेहरु यहाँ कसरी पुग्ने ? यसबारे चर्चा गरौँ ।
तालिम नलिएका व्यक्तिले विमान अवतरण गरेपछि...
एजेन्सी । उडान र अवतरणको तालिम नलिएका व्यक्तिलाई यात्रीले भरिएको विमान अवतरणको अनुमति दिएको एक विमान कम्पनीले भारी रकम जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।
इमरान खानको चेतावनी: पाकिस्तान तीन टुक्रा हुनसक्छ
एजेन्सी । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले सरकारलाई ठूलो चेतावनी दिँदै सही निर्णय नगरे देश तीन टुक्रा हुने बताएका छन् ।
यो देशका एक जना पनि मुस्लिम हज यात्रामा नजाने, कारण यस्तो
एजेन्सी । श्रीलंका स्वतन्त्र भएपछि सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। महिन्दा राजापाक्षेको ठाउँमा प्रधानमन्त्री बनेका रनिल विक्रमासिङ्घेले देशलाई यस कठिन समयबाट बाहिर निकाल्नका लागि लगातार धेरै ठूला निर्णयहरू लिइरहेका छन् ।
युक्रेनलाई झट्का, अमेरिकाद्वारा रकेट सिस्टम दिन अस्वीकार
एजेन्सी । रुस र युक्रेनबीच युद्ध जारी छ । रुसलाई एक्लो पार्ने अमेरिकी प्रयासहरू पनि प्रभावकारी साबित भएका छैनन्। योसँगै रुसले युरोपेली देश र अमेरिकालाई युक्रेनलाई हतियार सहयोग नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।
रुसको समस्या बढ्ने ! अमेरिकाले युक्रेनलाई दिदैँछ यस्तो हतियार
एजेन्सी । पछिल्लो तीन महिनादेखि युक्रेनसँग युद्धरत रुसको समस्या थप बढ्न सक्ने बताइएको छ । अमेरिकाले एडभान्स रकेट प्रणाली दिएर युक्रेनको फायरपावरलाई तिब्रता दिने तयारी गरेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
विश्व आलु सम्मेलन डबलिनमा सुरु
एजेन्सी । आयरल्याण्डको डबलिनमा विश्व आलु सम्मेलन सुरु भएको छ । सो सम्मेलनमा विश्वका कम्तीमा पनि ६० देशका १ हजार जनाभन्दा बढी प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका बताइएको छ ।
क्यान्सरका कारण पुटिनको आँखाको ज्योति गुम्दै !
एजेन्सी । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेन र रुसबीचको युद्धका कारण लगातार चर्चामा छन् । पुटिन हेर्दा निकै फिट देखिन्छन् तर, उनको स्वास्थ्यस्थिति राम्रो नरहेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
एजेन्सी । साउथवेस्ट एयरलाइन्सकी परिचारिकालाई उडिरहेको विमानमा मुक्का हानेर दाँत भाँच्ने क्यालिफोर्नियाकी एक महिलालाई सङ्घीय जेलमा १५ महिनाको सजाय सुनाइएको छ ।